Real Gaming Myanmar - Real Gaming Myanmar Community
June 20, 2022 June 20, 2022 by Real Man
Team Spirit ရဲ့လက်ရှိ Form ဘယ်လောက်ထိကြမ်းနေပြီဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တဲ့ Yatoro ပြီးခဲ့တဲ့ Stockholm Major 2022 မှာ TI10 ချန်ပီယံ Team Spirit ဟာ 9th-12th Place နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော်တော်များများအတွက် Surprise ဖြစ်ခဲ့ပြီး Team Spirit အတွက်လည်း
June 15, 2022 June 15, 2022 by Real Man
LAN မဟုတ်ရင်လုပ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ Tundra WEU DPC 2021-2022 Tour3Division I ဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်တွေထဲက ၁ ပွဲဖြစ်တဲ့ Tundra နဲ့ ပူပူနွေးနွေးမေဂျာချန်ပီယံ OG တို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာမှာ Tundra က ၂ – ၀ နဲ့အနိင်ရခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့
June 13, 2022 June 13, 2022 by Real Man
SEA အသင်းတွေအများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ Kuku Kuku ဆိုတာ SEA ရဲ့ဝါရင့်သမ္ဘာရင့် Player ၁ ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝတလျှောက်မှာ Role ပေါင်းများစွားကစားခဲ့ဖူးပြီး လက်ရှိမှာတော့ T1 ရဲ့ Offlane Role မှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ဂဏန်းငြိမ်နေပါတယ်။ Gosugamers နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Interview အစီအစဉ်မှာတော့ T1
June 12, 2022 June 12, 2022 by Real Man
Tundra ဘာလို့ Stockholm Major ကနေ Herald တွေလိုကစားပြီးထွက်ခဲ့ရတာလည်းဆိုတာကိုပြောပြလိုက်တဲ့ Skiter ပြီးခဲ့တဲ့ ESL One Stockholm Major 2022 မှာ Tundra က အငြင်းပွားဖွယ်မရှိလူကြိုက်အများဆုံးအသင်းပါ။ အဲ့လိုကြိုက်ရအောင်လည်း Tundra ရဲ့ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာပြသခဲ့တဲ့လက်စွမ်းတွေရော၊ Group Stage မှာပြသခဲ့တဲ့လက်စွမ်းတွေက ပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။
June 10, 2022 June 10, 2022 by Real Man
Nigma ကလွဲရင်ဘယ်အသင်းမှာမှမကစားချင်ခဲ့တဲ့ Sumail Sumail ဆိုတာနဲ့ Dota2နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတိုင်းသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ TI5 ချန်ပီယံဖြစ်သလို ဘယ်လောက်ပဲ Pro Scene နဲ့ဝေးကွာဝေးကွာ သူ့လက်ကကျသွားတယ်ဆိုတာမရှိပဲ အမြဲပိုပြီးပဲ တိုးတက်လာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့မှာရှိတဲ့ Fan Base ကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ Team Secret
7.31d Game Play Change Log
June 9, 2022 June 9, 2022 by Real Man
7.31d Game Play Change Log ဒီနေ့မနက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Update မှာတော့ Dota Plus Summer 2022 အတွက် Battle Report Update အပြင် 7.31d Game Play Update ပါ ပါရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ 7.31d
Never Give Up! By MoonMeander
June 8, 2022 June 8, 2022 by Real Man
ဘဝမှာအရှုံးမပေးမချင်းမရှုံးဘူးဆိုတာကို သူ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပြောပြခဲ့တဲ့ MoonMeander NA မှာတဖြေးဖြေးနဲ့အင်အားကြီးအသင်းဖြစ်လာတဲ့ TSM ရဲ့အသင်းခေါင်းဆောင် MoonMeander ဟာ သိပ်မကြာသေးခင်မှာပဲ Twitch မှာ Live လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့အတွက်လပိုင်းများစွာကြာမှ ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Live လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Dota2အပြင်တခြားဂိမ်းပေါင်းများစွာကိုလည်း ကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ Developer
5 Players Who Will Miss DPC Tour 3
June 5, 2022 June 5, 2022 by Real Man
DPC Summer Tour(Tour 3) ကိုလွဲချော်မည့်နာမည်ကြီးကစားသမား ၅ ဦး DPC 2021-2022 Season ရဲ့နောက်ဆုံး Tour ကိုတော့ မကြာခင်မှာပဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Tour က အောက်တိုဘာလမှာ စင်ကာပူနိင်ငံမှာကျင်းပမယ့် TI11 ကိုဝင်ချင်တဲ့အသင်းတွေအတွက် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလို့လည်း ဆိုနိင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီနှစ်
Valve Announces TI11 Schedule & 7.31d Release Date
June 3, 2022 June 3, 2022 by Real Man
TI11 ကျင်းပမည့်ရက်နှင့် 7.31d Patch ထွက်မည့်ရက်များကြေငြာ TI11 ကို ၂၀၂၂ အောက်တိုဘာလမှာ စင်ကာပူနိင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်လောက်ထဲက အားလုံးသိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့် Schedule အတိအကျထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ နည်းနည်းတော့ အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ TI11 ကျင်းပမယ့် Format က
Why Sumail Getting 80 MMR Per Win in Ranked Matches?
June 1, 2022 June 1, 2022 by Real Man
Sumail ဘာလို့ Rank ၁ ပွဲနိင်ရင် MMR 80 လောက်တက်နေတာလဲ? ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲ Dota2လောကမှာ King လို့နာမည်ကြီးတဲ့ Sumail ၁ ယောက် Team Secret ကနေထွက်ခွာပြီးသိပ်မကြာခင်မှာ Team Nigma ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ Secret ကို